PCT Letrozole budada - Shan waxyaabo ah waa inaan ogaadaa !!! | AASraw
/blog/Letrozole/PCT Letrozole budada cayriin-Shan shay waa inaan ogaadaa !!!
Posted on 11 / 05 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray Letrozole.
Q1: Waa Beerta loo yaqaan "Letrozole" steroid?
A1: Daawada cagaaran ee Letrozole, walxo cayriin ah steroids budada ah ee Letrozole, waa nooc ka mid ah Hormore, ma ah steroid, ka mid ah taxane PCT, kuwa kale waa sida tamoxin,Clomid,Aromasin,
Halotestin, Anastrozole, Waa kuwan macluumaadka aasaasiga ah:
Melt Point: 181-183 ° C, Midab: Caddaan ama cad budada rystalline cad, dadku waxay iibsadaan Letrozole oo badanaa lagu keydiyaa heerkulka qolka. Marka loo eego noocyada kale, Budada loo yaqaan 'Letrozole powder' ayaa ka sarreeya, daahirnimo sarreysa, tiro badan, qiimo jaban, sida laga soo xigtay adeegsadayaal badan , Yaa horay uga iibsaday khadka tooska ah, 10 garaam oo budo ah ayaa sameyn kara kumanaan kiniin / kaniiniyaal ah.
Q2: Miyuu lafa-guruubka loo yaqaan 'Letrozole' loo adeegsadaa kansarka naas-nuujinta?
A2:Budada cayriin ee budada ah ee loo yaqaan 'Letrozole budada cayriin' waa mid caan ku ah dumarka, loona isticmaalo daroogada loogu talagalay kansarka lidka ku ah naasaha, laakiin taas kaliya maahan, sidoo kale Letrozole wuxuu ka shaqeeyaa jirka, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah daawooyinka ugu awooda badan ee kiciya heerka dheef-shiid kiimikaadka jirka kor u qaadista gubashada baruurta. Sidoo kale waxay faa'iido u leedahay hoos u dhigidda heerarka LDL (xun) ee kolestaroolka iyo kor u qaadista heerarka spermatogenesis ee bukaanka labka ah ee qaba cudurrada unugyada yar-yar iyo daaweynta endometriosis. Jiilka seddexaad ee xayawaanka aromatase xakameynaya, faa'iidooyinka Letrozole, ayaa sidoo kale loo adeegsadaa in lagu dhiirrigeliyo kordhinta hormarinta ee hormoonka koritaanka, cortisol, SHBG, soosaarka cagaaran ee borotiinka qabta, HDL, iyo koritaanka iyo horumarinta sifooyinka galmada. Haddii taasi aysan ahayn, Femara waxa kale oo ay leedahay awooda lagu horumarinayo howlaha difaaca caafimaadka leh, heerarka kolesteroolka caafimaad, caafimaadka wadajirka ah, shaqada garashada, iyo kobcinta murqaha iyadoo yareyneysa ama xitaa tirtiraysa saameynta daawooyinka estrogenic sida maqaarka oilyada, ginecomastia,
Q3: Waa budada Letrozole loo isticmaalo sida AI wanaagsan?
A3: Inta badan ciyaartoyda kor u qaada cayaaraha marka la dooranayo aromatase inhibitor waxaa jira seddex doorasho caadi ah; Arimidex, Aromasin iyo Letrozole oo mid waliba waa mid aad u la mid ah ficilka. Ujeedada ka-reebista aromatase inta badan waxay ku taal magaca magaca laftiisa; si loo xakameeyo enzyme aromaticase. Isticmaalaha user steroid tani waa mid muhiimad badan sida badan steroids anabolic androgenic wuxuu aromatise ku beddeli doonaa si loo beddelo estrogen iyada oo loo marayo habkan. Isbedelka iyo kor u qaadista estrogen waxay keeni kartaa waxyaabo badan oo aan la rabin, sidaas daraadeed Letrozole waxa uu ka hortagaa heerka qiyaasta estrogen, si loo yareeyo dhibaatada jidhkeena.
Q4: Imisa goosrole ayaan qaadanayaa?
A4: Qiyaasta ugu badan ee dawada loo yaqaan 'Letrozole' ee uu isticmaalehu rabo inuu isticmaalo waxay noqonaysaa 2.5mgs maalintii. Waxaa lagu muujiyey daraasado badan in qiyaastaani ay baabi'in doonto ku dhowaad dhammaan estrogenka jirka ku jira ku dhowaad dhammaan shakhsiyaadka. Qiyaasta kasta oo ka sarraysa tan waxay noqonaysaa mid aan loo baahnayn. In kasta oo awood loo leeyahay in la kordhiyo xaddiga hoormoonka lutenizing, hoormoonka kiciya follicle, iyo hormoonka galmada ee ku xidha globulin dadka isticmaala Letrozole waxay noqon kartaa mid aan waxtar lahayn haddii loo isticmaalo inta lagu jiro daaweynta wareegga dambe. Tani waxay sabab u tahay awoodda xarunta si ay u waddo heerarka estrogen oo aad u hooseeya inta lagu jiro isticmaalka. Marka xarunta la joojiyo tani waxay ku dambayn kartaa "saamayn dib-u-soo-celin" ee heerarka estrogen iyadoo kuwani ay noqdaan kuwo aad u sarreeya, wax ay tahay in laga fogaado inta lagu jiro ama ka dib daaweynta wareegga dambe.
Q5: Maxaa dhici kara haddii uu ka badnaado?
A5: Shaki kuma jiro, heerarka hoos u dhaca ee estrogen ayaa caawin doona in lagu qalajiyo jirdhis iyo fara badan oo xakameyn kara waxay keeni kartaa dhibaato.
Letrozole wuu qallajin karaa oo u engegi karaa jirka oo aad u badan isaga oo ka tagaya si caadi ah oo daciif ah raadinta muuqaalka.
Sidaa daraadeed, sida ay u qorsheeyaan cuntadooda markay isticmaalayaan daawooyinkan waa su'aasha ah in laga fikiro, dhab ahaantii, cuntada waa wax walba oo ku saabsan kor u qaadida waxqabadka iyo dheellitirka nafaqeynta.
Sidoo kale, xad dhaafka ah ee budada cayriin ee Letrozole waxay keeni kartaa heerarka hoose ee estradiol, taas oo keeni karta saameyno xun ee luminta libido, niyad jab, xanuunka wadnaha, ama musqulaha muuqda. Haddii lagugu cunsuriyadeeyey markaad isticmaaleysid steroids sambabada sida testosterone ama Dianabol, estradiol oo aan caadi aheyn ayaa sidoo kale keeni kara luminta libido ama niyadjab, waxay sababi kartaa sii-haynta biyaha, waxayna keeni kartaa ama sii xumayn kartaa ginecomastia.
Waa maxay isticmaalka duritaanka Nandrolone decanoate? Daawooyinka PCT ee soo kabashada –Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin